Faallo:-Gubashada Suuqa Bakaaraha, waa qoorshe ay soo maleegtay Madaxda dowladda KMG ah ee lagu waxyeeleynayay Ganacsatada Beelaha Hawiye. | JILYAALE_ONLINE
Faallo:-Gubashada Suuqa Bakaaraha, waa qoorshe ay soo maleegtay Madaxda dowladda KMG ah ee lagu waxyeeleynayay Ganacsatada Beelaha Hawiye.
October 3, 2007 by jilyaale
Boqalaal qof oo ka mid Ganacsatada Soomaaliyeed ayaa Saakay gacanta madaxa Saaratay, kadib markii ay ku hantibeeleen dabkii xalay qabsaday Suuqa 1aad Geeska Afrika ee magaalada Muqdisho, balse waxaa hubaal kuwo badan oo genacsatadaas ka mid ah, ay qabaan in dhacdadan tahay mid ay soo maleegday Dowladda Mbegati, waa qoorshe loogu gun lahaa in lagu jibiyo Ganacsatada Beelaha Hawiye ee ka soo horjeeda dowlad u yaalka lagu soo dhoodhoobay dalka Keniya.
Dowladda Ethiopia iyo dowlad KMG ah ayaa lagu soo warramayaa in qosol dhawaaqiisa xalay ilaa saakey laga maqlayey agagaarka Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya, balse khubarada war isgaariinta sirta ah ayaa sheegay in khadadka telefoonada sirta ah ee Muqdisho iyo Addis-ababa ay xalay ilaa iyo Saaka isku xirnaayeen hadallo sir ahna laga dhageystay.
Ra’isul Wasaare Geedi ayaa si hoose oo qosol ku laban, ugu tacsiyadeeyey Gonacsatadii ku basbeeshay hantidooda dabkii xalay laga ootay wadooyinkii gurmadka ka soo geli lahaayeen, lana dhigay Ciidamado tira badan.
Suurta gal maaha in indhaha laga fiiriyo, dhegahana laga xirto dhibka ku dhacaya bulshada Soomaaliyeed, sidaas darteed, waa inuu caqliga shaqeeyaa, loona sara kacaa sidii loo badbaadin kara dadka danyerta ah oo macluusha u dhimanaaya, inta ay goori goor tahay.
Midda kale waxaa la yaab ah dadkii maskaxda u ahaa dadka danyarta ah ayaa maalin kasta lagu khaarjiyaa magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee dalka, arrintan ayaa lagu soo warramayaa in ay ka dambeyso dowlada Mbegaati, waana qorshe lagu doonayo in Soomaaliya laga tirtiro ama laga dhaqo Maskaxdii Soomaalida isu keeni lahayd.
Waa arrin ay ka dambeeyaan dalalka Ethiopia, Keniya, America, iyo dowlada badan oo reer galbeed iyo carab ah, waxaana hubaanti ah in goor dhow gudaha Soomaaliya laga wayn doono qof Aqoon cilmiyadeed iyo Caqliyeedba leh, tani waa eraygii ahaa “MAS MADAXAA LAGA DILAA“, balse qosolka dhawaaqa dheer muxuu ku danbeyn doonaa ???.
Bal fiiriya oo daawada Swirrada ma xaqbaa in sidaas loo galo hantidii shacabka Soomaaliyeed, tani waxay kuu caddeynaysaa inay jirin wax la yiraahdo dowlad Qaran :-
← Warbixintii ugu dambeysay ee dabkii xalay qabsaday Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho (Hoos ka daawo Sawirada).
Jendayi Frazer oo si weyn ugu fadeexowday difaacida dambiyada dagaal ee Ciidamada Ethiopia, iyadoo laqorsheynayo Cunna qabateyn lagu soo rogo dowladda Ethiopia. →